नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : अख्तियारमा हरेक पार्टीको भागबण्डा छ, त्यसैले ठुला नेता र भ्रस्ट होइन दुई / चार हजार खाने खरिदार, सुब्बा मात्र समातिन्छन !
अख्तियारमा हरेक पार्टीको भागबण्डा छ, त्यसैले ठुला नेता र भ्रस्ट होइन दुई / चार हजार खाने खरिदार, सुब्बा मात्र समातिन्छन !
* नेकपा, काँग्रेस, रा.प्र.पा, मेधेशी देखी हरेक दलका नेता तथा कार्यकर्ता र जनताले यो अन्तर्वार्ता हेर्नुहोला र छातीमा हात राखेर सोँच्नुहोला ।
नेपालको राजनीति बिना लगानीको ब्यवसाय भएको छ, जङ्गल देखी सिँहदरवार सम्म लुटतन्त्र छ, हाम्रो देश भ्रस्टाचारले नै सकिँदैछ भन्दै पुराना अधिबक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले यसरी खोले रहस्यहरु !
ओलीप्रतिको भरोसा घट्यो कि अझै बाँकी छ ?